समृद्ध समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्दै जनतामा खुशी ल्याउँछौं : मन्त्री बाँस्कोटा (अन्तर्वार्ता) « Dainiki
१४ भदौ, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमले नतिजा दिन थालेको बताउनुभएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को समाजवादी नारामा जनताका विविध कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउँदै उहाँले तराई, पहाड र हिमालका जनतामा खुशीको सञ्चार प्रवाह हुन थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधान जारी भयो, राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य भई व्यवस्थापकीय सङ्क्रमणकाल शुरु भयो । संविधान जारी भएपछि अरु कानूनका कुराहरु पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तीन सय ३८ कानूनमध्ये ३०९ कानून एक वर्षमा बने । एक वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार वर्षका रुपमा हामीले व्यतीत गर्यौँ । सामाजिक सुरक्षा अभियान शुरु गर्यौ, यसै अवधिमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को काम शुरु ग¥यौँ । विगतको विरासतबाट आएको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो ।
नयाँ कार्यक्रम पनि शुरु भयो । अन्धाधुन्ध ठेक्का लगाउने काम पनि हामीले बन्द गर्यौं । स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा मात्रै स्रोत उपलब्ध गराउनेतर्फ हामी लाग्यौँ । वित्तीय सुधारको काम पनि शुरु भयो । केही मान्छेलाई अहिले पनि केही काम भएजस्तो लाग्दैन । बजेटको सुनिश्चिताबिना कार्यक्रम घोषणा गर्नु भनेको दिगो विकासका लागि राम्रो कुरा होइन । अनेक क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, सञ्चार, रेलमा भएका छन् । पानीजहाजको त कार्यालय नै शुरु भइसकेको छ ।
विदेश सम्बन्ध पनि एकदमै राम्ररी अगाडि बढेको छ । यो सबैभन्दा राम्रो सम्बन्धका रुपमा विकास भएको छ । आमरुपमा कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै सीमित रहेको नेपालको विदेश सम्बन्धलाई अहिले ‘पोलिटिकल लेभल’बाट अगाडि बढाइएको छ । यसै अवधिमा हामीले लगानी सम्मेलन गर्यौैँ, ‘सगरमाथा संवाद’ गर्दैछौँ । ‘भिजिट नेपाल २०२०’ हामीले आयोजना गरेका छौँ ।
रेलमार्ग धमाधम बन्न थालेका छन् । राजमार्ग धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । आजको भोलि त सबै कुरा हुँदैनन् तर सोचहरु क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेका छन् । ‘भिजन’ ‘मिशन’ तथा ‘प्रोगाम’ र बजेटसहित हामी अगाडि बढेका छौँ । आर्थिक वृद्धि पनि विगतका वर्षभन्दा झण्डै एक प्रतिशतले बढेको छ । यो कुनै चानचुने कुरा होइन ।
हामीले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छौँ । यो कोही कसैप्रतिको अविश्वास होइन । परिभाषित काममा केन्द्रित बन्नुपर्छ । त्यसैमा केन्द्रित बन्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले सोही आधारमा कामहरु अगाडि बढाएका छाैँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा समाजवादको एउटा नारा हो । यो थाहा पाउनुपर्छ सबैले । चीनमा समाजवाद लागू भएको ७० वर्ष भयो । अहिले पनि चार पाँच करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि छन् । त्यहाँको व्यवस्था खराब होइन नि । निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।
अमेरिका पूँजीवादको संसारको सबैभन्दा बलशाली तागत भएको मुलुक हो । त्यहाँ नभएको चिज नै केही छैन । अमेरिकामा ‘होमलेस’ कति छन् ? गरीब कति छन् ? समस्या त्यहाँ छैन ? छ । त्यसैले हामीले हाम्रा देशका जनतालाई सुखी राख्नका निम्ति राज्यको तर्फबाट सके जति विवेक पु¥याएर विवादरहित ढङ्गले पहलकदमी लिनुपर्छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु बने कि बनेनन् ? यसले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि मद्दत पुग्छ । नागरिकलाई सम्मान र सुखको नाराभित्र समेट्छ । सुख र समृद्धि दिन्छ ।
पैसा मात्रै भएर मात्रै मान्छे खुशी हुँदैन । त्यसो भए खर्बपतिले पनि आत्महत्या गरेको सुन्नु पर्दैनथ्यो होला । सुखभित्र के कुरा आउँछन्भन्दा, सम्मान र सुरक्षा पनि सुखका कुरा हुन् । अब हामीले सन् २०२२ मा त अल्पविकसित देशबाट माथि उक्लने कुरा गरेका छौँ । त्यस बेलासम्म हामी आधारभूत खानेपानीको कुरा टुङ्गो लगाउँछाँै । अहिले नै हामी सुरुङमार्गतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ । सम्पर्क सञ्जालको विस्तारले सहज बनाउँछ । यो असाध्यै महत्वपूर्ण चिज हो । संसार नै आज ‘कनेक्टिभिटी’मा चलेको छ । रोड, समुद्र, यातायातका सञ्जाल पनि त्यहीभित्र पर्छ ।
सञ्चारको पनि एउटा सञ्जाल हुन्छ । रोडको पनि अर्को हुन्छ । त्यसले हामीलाई जोडिदिन्छ । त्यसैले हामीले अब राजनीतिक लडाइँ पार गरेर र अधिकारको लडाइँको प्रश्न सकिएको हुनाले अब राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान भनेको त्यता जानुपर्छ । म बताउन चाहन्छु कि ‘आफ्नो गाउँ, आफँै बनाऔँ’ भन्ने तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको सरकारले एउटा गाउँमा रु तीन लाख दिँदा बसाइँसराइँको समस्या रोकिएको थियो । तीन लाखले ३० औँ लाखको काम भएको थियो । जनपरिचालन त्यसरी भएको थियो ।
त्यसैले मान्छेमा उत्साह भर्ने कुरा हो । यो सरकारले पर्याप्त उत्साह भरेको छ तर के छभन्दा सरकारले गरेको कामको परिणाम आजको भोलि नआउने भएकाले केही धैर्य चाहिने र केही समय लाग्ने देखिन्छ । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र पनि विधि पु¥याउने मानसिकताबाट चलेको हुनाले र यसबीचमा व्यवस्थापकीय सङ्क्रमणको कारणले कर्मचारीको समायोजनले केही समय खायो । हामी काम गर्दैथ्यौँ, विपक्षी आरोप लगाउँदै थियो । कामभन्दा आरोपको स्वर नै ठूलो भयो । विशेष गरी सोसल मिडियाले पनि नकारात्मकताको खेती मच्चाएर लग्यो ।
हामीलाई ‘पपुलिस्ट’ हुनु छैन । ‘पपुलर’ हुनुपर्ला, तर ‘पपुलिस्ट’ हुनु पर्दैन । आत्मप्रचारको शिकार हुन चाहँदैन । जे गर्नुपर्ने हो, त्यसको ‘मेन कोर्स’ बाट विचलित हुन सक्दैनौँ । त्यसबाट दायाँबायाँ पनि हुन सक्दैनौँ । सुख, समृद्धिबाट लोकतन्त्र, शान्ति समृद्धिका मुद्दामा कानूनी, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सम्पूर्ण कुरा पूरा गरेर अगाडि बढ्छाैँ जसले गर्दा समृद्ध समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्नेछ । यस वर्ष हामीले के भनेका छौँ, भने अघिल्लो साल आधार वर्षका रुपमा रह्यो । यस वर्ष कार्यान्वयन र अरु वर्ष हाम्रा परिणामका वर्ष हुनेछन् । यस हिसाबले हामी जान सक्छौँ । सञ्चारको क्षेत्रमा ‘क्लिन फिड’ कसैले ल्याएको थियो ? यसअघि पनि सरकारहरु थिए नि ?
समाजलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ । स्वतन्त्रताको कुनै सीमा हुँदैन तर मर्यादाको सीमा हुन्छ । मान्छे स्वतन्त्रताका निम्ति लड्दै आएको छ तर मर्यादा हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै पनि समाजको मर्यादा हुन्छ कि हुँदैन ? भारतमा रक्सी किन्नुपर्यो भने बाबुको नाम, रक्सी पिउने मान्छेको नाम राख्छ कि राख्दैन ? त्यो अनुशासन होइन ? अमेरिकामा १८ वर्ष नपुगी रक्सी किन्न पाइँदैन । त्यो केही भएन ।
त्यो तानाशाही भएन, निरङ्कुशता भएन । यहाँचाहिँ १२ बजेपछि रक्सी खान पाइँदैन भन्यो भने ‘कम्युनिष्ट सरकार’, ‘दुइतिहाइको सरकार निरङ्कुश’ भयो भनिन्छ । मान्छे बाटामा गएर लडेको हुन्छ । भोलिपल्ट उसले सरकारको आलोचना गर्छ । यो तरिकाले त चल्दैन । समाजले पनि आफ्नो समाजको दिशा कता लान खोजेको हो स्वतन्त्रतातर्फ वा स्वच्छन्दतातर्फ ? स्वच्छन्दतातर्फ जाने हो भने कुनै न कुनै दिन हाम्रो समाज दुर्घटनामा पर्छ, भीडहरुद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ । भीड भनेका खहरेजस्ता हुन्, त्यो क्षणिक हुन्छ ।
त्यसको दर्शन हुँदैन, विचार हुँदैन । अनुशासन हुँदैन, मर्यादा हुँदैन, लगाव हुँदैन र गन्तव्य पनि हुँदैन । त्यो जम्माजम्मी आवेग र आक्रोश मात्रै हुन्छ । हाम्रो समाजलाई निर्देशित र ‘गाइडेड’ गराउने गरी कुनै पनि प्रकारको नाममा देखापरेका छन् ‘सोसल साइट’ । ‘मिडिया’ र ‘सोसल साइट’ फरक कुरा हुन् ।
यसमा त म दावाका साथ भन्छु सरकारको काम तथा असन्तुष्टिलाई भन्दा पनि प्रणालीलाई खत्तम बनाउन खोज्ने भीड पनि छ । कसैले उरालेको भीड पनि छ । केही दिनअघिको प्रदर्शनमा तस्वीर कसका थिए ? ढाडमा बोकेको तस्वीर कसका थिए ? नारा के लागेको थियो ? अनि कानूनले पत्रकारिता र अपराधलाई एउटै भन्छ ? पत्रकारको एउटा कार्ड बोकेर हिँड्दैमा तरबार बोकी मान्छे काट्दै हिँड्न पाइन्छ ? मार्दै हिँड्न पाइन्छ ? जे पायो त्यही गरेर हिँड्न पाइन्छ ? त्यो त अपराधीकरण हुन्छ ।
त्यसैले समाजमा अपराधीकरणलाई कुनै ठाउँ छैन । यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । यस्ता केही अपवादका घटना हुँदा र छानबिन गर्दा, कसैलाई छानबिन नै गर्न पाइँदैन भन्ने हो भने ‘मत्स्य न्याय’को समाज स्थापना गर्न लागेको हो कि एक्काइसौँ शताब्दीको गणतन्त्र नेपालको ? राज्य संविधानको सर्वोच्चता र कानूनी विधिद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ । परिचालित हुन्छ । कुन समाज बनाउन खोजेको हामीले ? त्यस हिसाबले यस्ता अराजकता मच्चाउन खोज्ने र अराजकतातर्फ लान खोज्ने वा जान खोज्ने काम क्षणिक अभ्यास हो । जसले चाह्यो, यो उनीहरुलाई पनि थाहा हुनुपर्छ । यो गणतन्त्र कसैले लादेर ल्याइदिएको होइन । यो गणतन्त्र जनताले रगत बगाएर ल्याएको हो ।
एक दिनको हो ? एक जना मान्छे मरेर आएको हो ? लहडमा आएको हो ? सन्तानब्बे सालको शहीद पर्वदेखि आजसम्म कति मान्छे मरेर आएका छन् ? निरङ्कुश, जहानीयाँ व्यवस्था, वंशको व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित थिएन, जनतालाई मन परेको थिएन । समाजको नेतृत्व गर्दैनथ्यो । त्यस्तालाई हटाउन त जनताले कत्रो बलिदान दिनुपर्यो । चार जना उफ्रेर जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन खोज्नु चाहिँ बेकारको कुरा हो । यसमा कोको रमाउन रमाउन । रमाउन पाइन्छ ।
आँखामा पट्टि बाँधेर संसार अँध्यारो छ भन्न पाइन्छ ? कानूनहरु आउँछन्, आउँछन् । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित कानून पनि आउँछ । कानून त आउँछ । सामाजिक सञ्जाल, मिडिया काउन्सिल पनि छ । आमसञ्चार पनि आउँछ । ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । विज्ञापन कानून आइसकेको छ । सूचना प्रविधि पनि आउँछ । हुलाक पनि आउँछ ।
त्यसम्बन्धी कानून आइसक्यो त । ‘ह्याकिङ’ गर्ने, बैंकिङ कसूर गर्ने, साइबर क्राइम गर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । साइबर सेक्युरिटी केन्द्र शुरु भइसकेको छ । डाटा सेन्टर स्थापना भएको छ । कहाँबाट हमला भइरहेको, छकहाँबाट ‘ह्याकिङ’ भइरहेको छ, त्यो थाहा पाउने प्रविधि जडान भइसकेको छ । इमेल निर्देशिका हामीले बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ ।
डाटा रिकभरी सेन्टर हेटाँैडामा खोलिएको छ । यी त भएका काम हुन् नि । पत्रकारसँग सम्बन्धित दुईतीन वटा कानून आए । पत्रकारका लागि रु पाँच करोडको कोष स्थापना भएको छ । अरु गफ गरेर हिँडेका थिए । लामो समय सरकार चलाएकाले स्वतन्त्रताको गफ छाँटेकै थिए । हामीले व्यवहारमा नै देखाएका छौँ । विज्ञापनसम्बन्धी कानून त संसद्बाट पास नै भइसकेको छ । त्यसले ‘क्लिन फिड’को कुरा ल्यायो जसबा मिडिया थप बलियो बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि काम राम्ररी भएको छैन, विधि र प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ तवरले काम शुरु हुन्छ । यसै वर्ष बुटवल र विराटनगरमा ‘इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ । डाटा सेन्टर काठमाडौँ, इटहरी र नेपालगञ्जमा राख्छौँ । कर्णाली प्रदेश र २ नं प्रदेशमा ‘ब्रोड व्याण्ड इन्टरनेट’ पुर्याउने कुरा करीब करीब अन्तिम चरणमा छ । टेलिकमको फोर जी परियोजना पनि अगाडि बढेको छ । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा आगामी कात्तिकसम्म २५ वटा प्रमुख शहरमा पुर्याउँदै छौँ । आगामी वैशाख/जेठभित्र यो परियोजना सम्पन्न गर्र्छांै ।
स्मार्ट सिटी त छँदैछ, त्यसभन्दा अगाडि बढेर सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम पनि शुरु गरेको छ । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जनशक्तिको परिचालन पनि हुन्छ । जनशक्ति परिचालन र उत्पादनमा सजिलो बनाउँछौँ । जस्तो अहिले पहाडको फेदीमा रहेको कुनै संरचनालाई ‘स्वीच अन’ गर्न मान्छे हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तो बाध्यतासमेत अन्त्य हुनेछ । मोबाइलमा क्लिक गरेपछि ‘स्वीच अन’ हुन्छ । ट्याङ्की भरिएपछि मोबाइलबाटै अफ गर्न सकिन्छ ।
यो सबै ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीले गर्छ । अहिले हामी विद्यालयमा यसको प्रयोग गरिरहेका छौँ । एक हजार विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटसहितको सूचना प्रविधि पुर्याउने काम गर्दैछौँ । सात वटा विद्यालयमा शुरु भइसक्यो । जनकपुर, पोखरालगायत स्थानमा उद्घाटन नै भइसक्यो । अबको सम्पत्ति भनेको खेतको पाटो होइन । सूचना प्रविधिमा आधारित ज्ञान हो ।
आगामी दिनमा गरीबी र प्रविधिबीचको द्वन्द्व नै प्रमुख चुनौती हुनेछ । त्यसैले डिजिटल दूरी कम गर्नका निम्ति हामी डिजिटल नेपाल ‘फ्रेम वर्क’लाई कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौँ जहाँ समाजको तल्लो वर्गले पनि लाभ पाउनुपर्छ । राज्यले झण्डै एक हजार मिलियन डलरको यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँदै छौँ ।
प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७६, शनिबार ११:४४